बिशेष Archives - Page 8 of 8 - ejhajhalko.com
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई देउवा को प्रश्न – नेपालमा जय नेपाल नभनेर के ‘जय भारत’, ‘जय चीन’ भन्ने ?
काठमाडौँ ,२९ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडियासम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिडियासम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेको उल्ल...
प्रदेश नं. २ मा भोलि सोमबार सार्वजनिक बिदा
धनुषा , २९ बैशाख । प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । जानकी नवमी धुमधामसँग मनाउन प्रदेश सरकारले भोलि सोमबार प्रदेशभित्र सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार परेको जानकी नवमी भव्यता एवं हर्षोल्लासपूर्वक मनाउन बिदाको घोषणा गर्नुभएको हो ।...
प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ (हेर्नुहोस यस्तो छ)
पोखरा २ फाल्गुण ; प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे । ओलीले सिंहदरबारबाट देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेको पूर्णपाठ :- ...
विद्यार्थी संगठन र प्रशासन बीच झडप ; तीन विद्यार्थी नेता घाइते
काठमाडौं ; संगठन निर्माणको क्रममा नेपाल एकेडेमि अफ टुरिज्म एण्ड होटल म्यानेज्मेण्ट रविभवनस्थित (नाथम) मा विद्यार्थी संगठन र प्रशासनबीच झडप भएको छ। झडपमा तीन विद्यार्थी घाइते भएका छन्। कलेजमा पूर्व एमाले निकट अनेरास्ववियु र पूर्व माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले संयुक्त रुपमा संगठन निर्माण गर्न लागेका थिए। ...
देश पानी जहाजको युगमा प्रवेश ; प्रधानमन्त्री ओली
पोखरा; सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश पानी जहाजको युगमा प्रवेश गरेको दावी गरे । उनले भने, नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा बाहक पानी जहाज छिट्टै चल्छ । कार्य...
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन संगै सरकारका भावि योजना प्रस्तुत गर्ने
पोखरा ; बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दैछन्। उनले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो ४ बजे सम्बोधन गर्ने तयारी भएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ। ओलीले सम्बोधनमा सरकारले एक वर्षमा गरेक...
रिमा सुनार घर बडिगाड गाउँपालिका-६ भीमगिठे, बागलुङ। उमेरले बल्ल १६ वर्ष टेक्यो। झट्ट देख्ने मानिस उनलाई देखेर तर्सिन्छन् पनि। कारण उनको आँखामा ठूलो मासु बाहिरै देखिन्छ। आँखा फुटेजस्तो दृश्य देखिने भएकाले उनको स्याहारसुसारमा पनि कठिनाइ भएको रिमाका आफन्त बताउँछन्। यो खबर दिल सिरीषले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्। रमाइल...
प्रदेश ३ को राजधानी काभ्रेपलाञ्चोक बनाउन पाँच जिल्लाको सहमति
काभ्रेपलाञ्चोकलाई ३ नं प्रदेशको राजधानी बनाउन सांसदहरुले पहल थालेका छन् । जिल्लाको प्रनिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का सांसद गंगाबहादुर तामाङ (दोङ) ले प्रादेशिक राजधानीका लागि सिफारिस समिति नै निर्माण गरेर काम थालिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रशासनिक काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रनिनिधिसभा क्षेत्र नं २ का सांसद गोक...
अस्ट्रेलियामा निर्माण गरिएको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
लामो समयदेखी अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा रहेर पनि आफ्नो मोडलिंग र अभिनयमा सक्रिय भएका राजु कानले एक म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेका छन्। ‘शाहारा’ एल्बममा शमबेश गरिएको शशांन कंडेलको स्वर, शब्द र संगीत रहेको “जानेभए जाऊ” बोलको गीतको भिडियो उनले निर्देशन गरेका हुन्। यो म्युजिक भिडियो हालै यु ट्युव मार्फत रिलिज गरिएको छ। अस्ट...
शनिबार काठमाडौंमा वर्षकै जाडो
काठमाडौंसहित मुलुकभर चिसो बढेको छ। उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २ डिग्रीको हाराहारीमा झरेको छ ।शनिबार काठमाडौंमा यस बर्षकै सबैभन्दा बढी चिसो अनुभव गरिएको छ। शनिबार साँझ ६ बजेको न्यूनतम तापक्रम २ दशमलव ८ डिग्री रेकर्ड गरेको थियो । तापक्रम क्रमश घट्दै जाने र अझ चिसो बढ्ने बताइएको छ । ‘यसपटक हिउँदमा शनिबार काठमाडौंमा सबैभ...
विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयले संस्कृत अध्यापनलाई उच्च महत्व दिन थालेपछि नेपालका केही विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित संस्कृतको पठनपाठन थालेका छन्। नेपालका तीन विद्यालयले बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको संस्कृत पाठ्यक्रम पढाउन सुरु गरेका हुन् । लन्डनस्थित सेन्ट जेम्स इन्डिपेन्डेन्ट स्कुलको स...
राष्ट्रिय क्रिकेटर पृथु सहित डेजाभू नाइट क्लबका ८ जना पक्राउ
काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको डेजाभू नाइट क्लबमा भएको तोडफोडको विषयमा सोधपुछ गर्न प्रहरीले राष्ट्रिय क्रिकेटर पृथु बास्कोटासहित डेजाभू नाइट क्लबका ८ जना पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । अपराध महाशाखाका प्रमुख दिवेश लोहोनीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा क्लबका सञ्चालक जयन श्...
राजनीतिको खेल – जुँगुकाण्डका पीडित र आरोपित यसरी मिले
दोलखा । राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ त्यसै भनिएको होइन रहेछ । दोलखाको जुगुमा मंगलबार यस्तै दृष्य देखियो । जो विरुद्ध आफ्नो छोराको हत्या गरेको अभियोग लगाएर किटानी जाहेरी दिए उसैलाई भोट दिन्छु भन्दै सँगै मन्चमा बसे गोरे तामाङ । जुँगु हत्याकाण्डका घाइतेले चुनावीसभाको अध्यक्षता गरे, ‘अभियुक्तहरु’ले पीडित परिवारका सदस्यसँगै...
विराटनगरको विकल्प खोजे क्याबिनेटमै प्रतिकार गर्छुः मण्डल
विराटनगर । विना विभागीय मन्त्री एवंम माअोवादीबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका शिवकुमार मण्डलले प्रदेश नम्वर एकको राजधानी विराटनगर बनाउनुको विकल्प नरहेको वताएका छन् । विराटनगरलाई प्रादेशिक राधानी नबनाउने चलखेल भएको भन्दै मन्त्री मण्डलले त्यसको डटेर सामाना गर्ने बताए । प्रेस चौतरी मो...